Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana fitsaboana - China Factory Equipment Medical
Ny Virus Sampling Tube Assembling Line dia ampiasaina amin'ny famenoana ny mpanelanelana amin'ny fantsom-pamantarana virosy. Izy io miaraka amin'ny ambaratonga automatique avo lenta, ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta ary manana fifehezana dingana sy fifehezana kalitao tsara.
Ny masinina fanangonana fanjaitra ra ampiasaina ho an'ny fanangonana vokatra fanjaitra karazana ra. Tonga dia mandeha ho azy izy io. Fandidiana mora sy azo antoka amin'ny fifehezana PLC & HMI tsirairay, mpiasa 3-4 ihany no afaka mihazakazaka tsara ny tsipika iray manontolo. Raha ampitahaina amin'ny mpamokatra hafa, ny masinina fanangonana fanjaona rà dia manana refy kely kokoa amin'ny ankapobeny, mihazakazaka kokoa sy mihazakazaka mihazakazaka, tahan'ny hadisoana ambany ary ny vidin'ny fikojakojana, sns.